Xaaladdii Colaadda Itoobiya Oo Kasii Dartay, Xasuuq Boqollaal Qof Oo Tigree Ah Lagu Laayay Baangado Iyo Faashash Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Dagaalka Socda | Foore News
Home Warar Xaaladdii Colaadda Itoobiya Oo Kasii Dartay, Xasuuq Boqollaal Qof Oo Tigree Ah...
Xaaladdii Colaadda Itoobiya Oo Kasii Dartay, Xasuuq Boqollaal Qof Oo Tigree Ah Lagu Laayay Baangado Iyo Faashash Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Dagaalka Socda
Mekelle, November 14, 2020- (Foore)- Hay’adda xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in boqolaal qof oo shacab ah lagu xasuuqay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, taasi oo dad goobjoogeyaal ah ay ku eedeeyeen ciidamada kooxda gobolka maamusha ee TPLF. Waa dhacdadii ugu horreysay ee lagu soo weriyo khasaare nafeed xooggan oo shacabka kasoo gaaray dagaalka u dhaxeeya xisbiga TPLF iyo dowladda ra’iisul wasaare Abiy Ahmed.
Warbixinta Amnesty ayaa timid maalin kadib markii dowladda Abiy ay sheegtay in ciidamadeeda ay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray. “Amnesty International waxay maanta xaqiijin kartaa in tobaneeyo ama boqolaal qof lagu dilay magaalada Mai-Kadra ee Koonfurta Galbeed ee gobolka Tigray, habeenkii 9-ka November ayada oo la adeegsanayo mindiyo iyo baangado,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Amnesty. Amnesty ayaa sheegtay inay xaqiijisay sawirro iyo muuqaallo laga argagaxo oo laga soo duubay meydadka dadkaas.
Meydadka waxaa ka muuqday dhaawacyo u muuqda inay sababeen hubka wax jara sida mindiyaha iyo baangadaha, ayaa lagu yiri warbixinta Amnesty. Goobjoogeyaasha ayaa sheegay in weerarka ay fuliyeen ciidamada TPLF kadib markii ay guul-darro kala kulmeen militariga dowladda, inkasta oo Amnesty ay sheegtay inaysan si madax-banaan u xaqiijin karin cidda ka dambeysa xasuuqan. Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay TPLF oo ku aadan dhacdadan.
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa shalay sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray ayaga oo ka adkaaday ciidamada deegaanka, oo uu ku eedeeyey xasuuq. “Galbeedka gobolka Tigray waa la xoreeyey. Ciidamada dowladda waxay hadda kaalmo iyo adeeg bani’aadannimo siinayaan shacabka, wayna quudinayaan,” ayuu Abiy ku yiri qoraal uu soo dhigay twitter-ka. Ayada oo is-gaarsiinta gobolka ay go’an tahay, way adag tahay in si madax-banaan loo xaqiijiyo sheegashada Abiy.
Dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey dagaalku waxa ay sheegayaan in ugu yaraan afar jiho ama aag uu dagaalku ka socdo labada dhinacna iska dileen boqollaal askari iyada oo xukuumaddu sheeganayso in ay afar magaalo ka qabsatay ciidamada maamulka Tigreega halka Tigreegu Iyana dhinacooda ka sheegteen guulo ay dagaalka ka gaadheen iyo maxaabiis badan oo ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya ee dawladda. Waxaana sii kululaanaya dagaalka labadan dhinac u dhaxeeya ee culus.
Previous articleAbiy Axmed Oo Ciidamada Itoobiya Ku Amray Inay Soo Qabqabtaan 39 Madaxda Tigreega Ah Oo Uu Ku Jiro Madaxweynaha Kililka Tigray & Kuwo Milatari
Next articleHogaaminta M/Muuse Biixi Oo 3 Sano Jirsatay Iyo Dib U Milicsiga Qaar Ka Mid Ah Ballanqaadyadii Uu Ololaha Ku Galay Oo Aan Illaa Hadda Waxba Ka Fulin